INagios Core: Yini i-Nagios nokuthi ungayifaka kanjani ku-Debian GNU / Linux? | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 17/08/2021 06:00 | Amanethiwekhi / Amaseva, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Emkhakheni we Amanethiwekhi namaseva kunezinhlelo zokusebenza ezinhle nezisebenza kahle ze- Abaphathi Besistimu / Abaseva (i-SysAdmins). Ngakho-ke, namuhla sizokhuluma ngocingo olwaziwayo I-Nagios Core.
I-Nagios Core ngokuyisisekelo inguqulo yamahhala ye- I-Nagios. Okuyinto ethandwa kakhulu ngokuyisisekelo imishini / izinsiza / uhlelo lokuqapha inethiwekhi ngefomethi ye- umthombo ovulekile.
Futhi njengoba kuyaqabukela sikhuluma ngezinkinga ezihlobene ne- izinhlelo, izinhlelo kanye nezinhlelo emkhakheni we Amanethiwekhi namaseva noma ukusetshenziswa okuqondile kwe- Abaphathi Besistimu / Abaseva (i-SysAdmins), ngokushesha sizoshiya ngezansi ezinye izixhumanisi zokunye okushicilelwe kwangaphambilini okuhlobene nale nkambu ye-IT:
"I-Webmin iyithuluzi lokuhlela elitholakala kuwebhu le-OpenSolaris, i-GNU / Linux nezinye izinhlelo ze-Unix. Ngayo, ungalungiselela izici zangaphakathi zezinhlelo eziningi ezisebenzayo, njengabasebenzisi, izikhala zesikhala, izinsizakalo, amafayela wokumisa, ukuvala ikhompyutha, njll, kanye nokuguqula nokulawula izinhlelo eziningi zamahhala, njenge-Apache web server, I-PHP, i-MySQL, i-DNS, i-Samba, i-DHCP, phakathi kokunye." I-Webmin: Ukuphathwa kusuka kusiphequluli sewebhu
1 I-Nagios Core: Uhlobo lwamahhala nolukhululekile lwamaNagios
1.1 Yini i-Nagios Core?
1.3.1 Izinyathelo zokulungisa uhlelo olusebenzayo
1.3.2 2.- Landa isoftware yamanje
1.3.3 3.- Hlanganisa isoftware yamanje
1.3.4 4.- Dala Abasebenzisi namaqembu
1.3.5 5.- Faka amaphakheji ahlukahlukene abalulekile
1.3.6 6.- Faka amafayili wokumiswa kwe-Apache
1.3.7 7.- Faka futhi ulungiselele i-Firewall ngama-IPTables
1.3.8 8.- Dala i-akhawunti yomsebenzisi ku-Apache ukuqala ku-Nagios Core
1.3.9 9.- Qala kabusha / Qala Izinsizakalo Ezidingekayo
1.3.10 10. - Ngemvume ukuze Nagios Core
1.3.11 Ukufaka ama-plugins we-Nagios Core
1.3.12 Izithombe zesikrini
I-Nagios Core: Uhlobo lwamahhala nolukhululekile lwamaNagios
Yini i-Nagios Core?
Ngokwe-website esemthethweni ye- I-Nagios, I-Nagios Core Kuchazwa ngale ndlela elandelayo:
"I-Nagios® Core ™ iyinethiwekhi yomthombo ovulekile nohlelo lokuqapha uhlelo. Ihlola abaphathi (amakhompyutha) nezinsizakalo ozicacisayo, ikukwazisa uma izinto zingahambi kahle nalapho zithuthuka. INagios Core ekuqaleni yayenzelwe ukusebenza ngaphansi kweLinux, noma ngabe kufanele isebenze ngaphansi kwezinye izinhlelo eziningi ezisebenza nge-Unix. Futhi, inguqulo yamahhala yethuluzi lethu lamanje elibizwa ngeNagios XI."
Phakathi kwezici eziningi ze- I-Nagios Core kungashiwo abali-10 abalandelayo:
Ukuqapha izinsizakalo zenethiwekhi (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, phakathi kwabanye.)
Ukuqapha izinsizakusebenza zabasizi abahlukahlukene ababekiwe (umthwalo weprosesa, ukusetshenziswa kwediski, phakathi kwabanye.)
Idizayini elula ye-plugin evumela abasebenzisi ukuthi bathuthukise kalula amasheke abo wenkonzo.
Ukuhlolwa kwensizakalo efanayo.
Ikhono lokuchaza isigaba sabaphathi benethiwekhi usebenzisa izingosi "zomzali", likuvumela ukuthi ubone futhi uhlukanise phakathi kwezingosi eziphansi nalezo ezingatholakali.
Izaziso zokuxhumana lapho ukusingathwa noma izingqinamba zesevisi zenzeka futhi zixazululwa (nge-imeyili, i-pager, noma indlela echazwe ngumsebenzisi).
Amandla okuchaza abaphathi bomcimbi ukuthi baqhutshwe phakathi komsingathi noma imicimbi yesevisi yokuxazulula inkinga okusebenzayo.
Ukuzungezisa okuzenzakalelayo kwamafayela okungena.
Ukusekelwa kokusebenzisa abaphathi bokuqapha abangasasebenzi.
Isixhumi esibonakalayo sewebhu sokubuka isimo samanje senethiwekhi, umlando wezaziso nezinkinga, ifayela lokungena, nokuningi.
Futhi manje eyakho ukulanda, ukufaka nokusebenzisa, sizosebenzisa i- «Umhlahlandlela Wokufaka Okusheshayo Kwe-Debian« futhi lokhu kungaba yi imiyalo yokuyala ukwenza ku-terminal (console) yohlelo lwakho lokusebenza:
Izinyathelo zokulungisa uhlelo olusebenzayo
Buyekeza Amakhosombe bese ufaka amaphakheji abalulekile futhi adingekayo ukuze usebenze nawo I-Nagios Core.
2.- Landa isoftware yamanje
3.- Hlanganisa isoftware yamanje
4.- Dala Abasebenzisi namaqembu
5.- Faka amaphakheji ahlukahlukene abalulekile
6.- Faka amafayili wokumiswa kwe-Apache
7.- Faka futhi ulungiselele i-Firewall ngama-IPTables
8.- Dala i-akhawunti yomsebenzisi ku-Apache ukuqala ku-Nagios Core
9.- Qala kabusha / Qala Izinsizakalo Ezidingekayo
Note: Qala kabusha uhlelo olusebenzayo uma kunezinkinga ngale miyalo yomyalo.
10. - Ngemvume ukuze Nagios Core
Gijimisa isiphequluli seWebhu emshinini wasendaweni uma uneGrafiki Yomsebenzisi Wendawo (i-GUI) noma kwenye ikhompyutha ekuNethiwekhi.Futhi kwibha yekheli bhala noma imiphi imiyalo elandelayo yomyalo njengoba ubona kufanelekile:
Note: Uma ungaboni iwindi le- "Nagios Core Login", hlola ukuthi i-Operating System yakho ngokususelwa ku-Debian GNU / Linux 8/9/10 inokulungiswa okulungile. "Impande yedokhumenti" i-del Iseva ye-Apache ngaphakathi kwefayela lokumisa elilandelayo: /etc/apache2/apache2.conf. Shintsha indlela /var/www ngalokhu okulandelayo: /var/www/html. Bese uqala kabusha insiza ye-Apache noma ikhompyutha, bese uyazama futhi kukhompyutha.
Ukufaka ama-plugins we-Nagios Core
Buyekeza Amakhosombe bese ufaka amaphakheji abalulekile futhi adingekayo ukuze usebenze nawo Ama-plugins we-Nagios.
Landa futhi uvule uziphu iphakheji yamanje nge- "Nagios Plugins"
Hlanganisa futhi ufake "ama-plugins we-Nagios"
Ngeminye imininingwane nge I-Nagios Core ungahlola izixhumanisi ezilandelayo:
Imihlahlandlela yokufaka esheshayo yokuqala
Mayelana neNagios Core
Ngokufingqa, njengoba sekubonile I-Nagios Core iyithuluzi lesoftware eliphelele lenkambu ye- Amanethiwekhi / Amaseva futhi i Abaphathi Besistimu / Abaseva (i-SysAdmins). Futhi ayinamandla kuphela kepha iyaguquguquka futhi iyaguquguquka, ngenxa yokusebenzisa okuningi kwayo ama-plugins. Futhi kulabo abangase bangayisebenzisi, kuhlale kunezinye izindlela ezinhle ezifana Zabbix, Iphrojekthi ye-Icinga neCockpit, phakathi kokunye okuningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » INagios Core: Yini i-Nagios nokuthi ungayifaka kanjani ku-Debian GNU / Linux?
I-KDEApps2: Iyaqhubeka nokuhlola izinhlelo zokusebenza zomphakathi ze-KDE